Sony dia hanolotra finday maro amin'ny fomba ofisialy amin'ny IFA 2018 | Androidsis
Sony hanolotra telefaona isan-karazany amin'ny IFA 2018
Eder Ferreño | | IFA, Sony
Afaka andro vitsivitsy dia manomboka ao Berlin ny IFA 2018. Ity dia iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra amin'ny taona eo amin'ny tsenan'ny telefaona, izay hianarantsika momba ny vaovao marobe. Marika maro amin'ny Android no ho eo amin'ity hetsika ity, ao anatin'izany i Sony. Vao tsy ela akory izay dia voamarina fa ny marika Japoney dia hanolotra ny Xperia XZ3 amin'ity hetsika ity.
anefa Toa tsy io finday io ihany no maodely Sony hatolotra mandritra ny hetsika. Nampiasa ny tambajotran-tseraserany ilay marika mba hampisehoana horonan-tsary kely. Ao anatin'izany dia avelany hisy topi-maso amin'ny vaovao ho fantatsika tsy ho ela.
Ankoatr'izay, amin'ny horonan-tsary dia azonao atao ny mahita ny sary famantarana Xperia, izay nitarika ny fiheverana fa ny orinasa dia hanolotra modely bebe kokoa ankoatry ny efa voamarina Xperia XZ3. Saingy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy misy angona momba ireo maodely azo aseho amin'ity IFA 2018 ity.
Tsy mino raha tsy Mahita. #SonyIFA pic.twitter.com/zTw54dWzKr
- Sony Xperia (@sonyxperia) Aogositra 28, 2018
Ny maodely Sony ihany izay voalaza hatreto dia ny Xperia XA3, telefaona iray izay hahatratra ny eo anelanelan'ny mpanamboatra Japoney. Na dia mbola tsy nilaza na inona na inona momba an'io maodely io aza ilay orinasa, dia tsaho izany.
Ka azo inoana fa tsy maintsy miandry isika mandra-piandohan'ny IFA 2018 vao hahafantatra ny telefaona na telefaona izay hatolotr'i Sony antsika, ho fanampin'ny Xperia XZ3. Nihena ny varotra orinasa manao dingana lehibe eo amin'ny tsena, saingy amin'ity taona ity dia manolotra antsika amin'ny fanavaozana ny fitaovan'izy ireo izy ireo.
Miloka amina endrika vaovao izy ireo ary avelany modely manana kalitao izahay. Ny olana lehibe an'i Sony, ankoatry ny fifaninanana lehibe ankehitriny, dia ny fitaovan'izy ireo manana vidiny lafo. Ary izany dia zavatra iray mahatonga ny mpanjifa misafidy safidy hafa ao amin'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Sony hanolotra telefaona isan-karazany amin'ny IFA 2018
Huawei dia manolotra ny beta an'ny Android 9.0 Pie ho an'ny telefaona 9
ZTE dia hanolotra ny Nubia Z18 amin'ny 5 septambra ho avy izao